Ọstrelia emepegharịrị oke mgbe ọnwa iri na asatọ nke mgbochi COVID-18 gasịrị
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa Australia » Ọstrelia emepegharịrị oke mgbe ọnwa iri na asatọ nke mgbochi COVID-18 gasịrị
Airlines • Airport • Akụkọ na -agbasa Australia • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Ọstrelia emepegharịrị oke mgbe ọnwa iri na asatọ nke mgbochi COVID-18 gasịrị.
N'agbanyeghị oke mba ofesi na-emeghere ndị Australia na steeti Victoria na New South Wales (NSW) na Australian Capital Territory, mba ahụ ka na-emechi emechi maka ndị njem nlegharị anya si mba ọzọ, ewezuga ndị si New Zealand gbara agbata obi.
Gọọmentị Ọstrelia ewepụtala otu azịza kacha sie ike maka ọrịa a, na-emechi ókèala mba ụwa ọnwa 18 gara aga.
Ụgbọ elu mba ofesi si Singapore na Los Angeles, USA bu ụzọ rute na Sydney.
A na-atụ anya na ihe dị ka ndị njem 1,500 ga-efeba na Sydney na Melbourne n'ụbọchị mbụ nke mmachibido iwu
Ndị ọchịchị gọọmentị Australia enyela ụmụ amaala Australia ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa ka ha gaa mba ofesi n'efu na-enweghị ikike pụrụ iche ma ọ bụ mkpa iche iche na mbata, malite na Nọvemba 1.
Mba ahụ edozila mmachi oke oke mba ụwa taa, na-enye ọtụtụ ezinụlọ ohere ịchịkọta mgbe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụbọchị 600 dị iche ma na-akpali ọnọdụ mmetụta uche na ọdụ ụgbọ elu dị na Sydney na Melbourne.
Ntugharị na-abịa dị ka nke ukwuu Australia na-agbanwe site na atụmatụ a na-akpọ COVID-zero-efe efe-nchịkwa ọrịa na-ebi ndụ na nje a n'ime nnukwu ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa. Ihe karịrị 77% nke ndị dị afọ 16 na ndị okenye nọ na mba 25.9 nde enwetala agba abụọ nke jab ka ọ dị ugbu a, ministri ahụike kwuru.
Gọọmentị Ọstrelia ewepụtala otu nzaghachi siri ike maka ọrịa a, na-emechi ókèala mba ụwa ọnwa 18 gara aga. Amachiela ma ụmụ amaala ma ndị njem si mba ọzọ ịbata ma ọ bụ ịpụ na mba ahụ n'enweghị agụpụ. Nkwagharị a kewara ezinaụlọ na ndị enyi, na-ahapụ ọtụtụ ndị Australia enweghị ike ịga mmemme dị mkpa, agbamakwụkwọ ma ọ bụ olili ozu.
N'isi ụtụtụ Mọnde, ụgbọ elu si Singapore na Los Angeles bụ ndị mbụ rutere na Sydney, Australia. Ndị njem na-abịarute kwuru na njem ha “dị ntakịrị egwu na ihe na-akpali akpali” ma kọwaa mmetụta ikpeazụ nke inwe ike ịlaghachi n'ụlọ mgbe oge a niile gasịrị dị ka “mgbapụta.”